Waalidiinta uga xumaaday - Santa Claus kajirin! | Apg29
"Waxaan la yaabay!"
Argagaxa dukaanka madhan. Picture: Youtube / SVT.
"Si qaybta ugu horeysay ee ay u sheegaan in Santa kajirin iyo in ay jiraan dad waaweyn oo kor u lebistaa ahaa mid aad u badan noo."
Khiyaameeyaan iyo carruurta khiyaanayn
Sanad walba waqti Christmas barashada dad badan oo waaweyn carruurtooda in ay aaminsan yihiin in sababihii - xitaa Masiixiyiin qaar ka mid ah. Tani waa in ay khiyaamo iyo carruurtooda khiyaanayn. Ma aha in aad baro iyaga in ay aaminsan yihiin in sababihii, laakiin waa in aad siin Ciise ayaa u!
qaybta koowaad ee kalandarka yuulka ah "Argagaxa dukaanka madhan" ayaa uga xumaaday waalidiinta qaar ka mid ah, haa tahay, xitaa warbaahinta. Kuwaas oo in la soo jeediyay in Santa kajirin!
"Waxaan la yaabay!" Qoraa waalid bogga Facebook SVT ayaa kadib markii uu arkay barnaamijka. "Carruurta Our aaminsan yihiin in Santa Claus iyo hadda maxaynu halkan u fadhinnaa oo ka wel ku saabsan su'aalaha noqon doonaa oo arrintan ku saabsan."
Well, waxa aad dhihi karaa boostada?
Sida haddii aan ku filan. Halkan more:
"Waxaan la yaabay! Ma ogi haddii carruurta ay sii wadi doonto si ay u arkaan xaqiiqada. "
Donald Trumps xaqa
Waxaa muuqda in ay aad u xasaasi u ah jiritaanka su'aal Santa ee. Sanadkii la soo dhaafay tan iyo Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump boot a in uu su'aalo jiritaanka goobta ee.
7-sano jir ah Collman Lloyd yimid Donald Trump ee phone-in on shirqoolka. Waxa uu la yaabay, haddii laga yaabaa, waxay ahayd mid aad u jir ah in ay aaminsan yihiin in Santa, laakiin hawlgalka qoyska ka mid ah ayaa iyada lagu sameeyo hadda ma su'aasha jiritaanka Santa ee.
Maxaa dhacaya haddii dadka waaweyn ee aan kaa gargaari kara laakiin in ay carruurtooda dhaqdo la been this! Waa maxay ka cabsan waxay? Runta waxa ay dhab ahaantii waa in Santa Claus aanu jirin?
"Been iyaga dhowr sano"
Warbixinta ayaa "been A cajiib ah" qori khubarada Boyle iyo McKay in waalidiinta noo sheeg in Santa Claus waa dhaawici kartaa xidhiidhka iyaga iyo carruurtooda. Waxa dhalin kartaa in ilmuhu ma kula tahay waalidkood in xaalado kale.
"Dhammaan carruurtu ugu danbeyn waxay heli doontaa in ay la jiifa iyaga muddo sanado ah, oo tanuna waxay keeni kartaa iyaga la yaabanahay waxa waxyaabo kale oo ay ku soo barteen oo ay sidoo kale been", ayuu yidhi borofisar Boyle.
"Haddii Santa Claus kajirin, waxaa jira Jinku? Waa sixir ah? Waa Ilaah? Haddii waalidku ay awoodaan in ay been ku saabsan wax si gaar ah iyo sixir, waxay run ahaantii la aamini karo awliyo xigmadda iyo runtu? moral si aad u hesho kids in ay aaminsan yihiin in noocaas ah quraafaad waa la warsan, "ayuu qoray khubarada warbixinta.
Tani waa sababta waxaa wanaagsan in runta ku saabsan Ciise iyo ma been ah oo dalka iyaga bari. Markaas, waxay had iyo jeer isku hallayn karo, waxa aad dhihi waa run, oo ay kalsooni isku qabto waa la hagaajin doona.
Waxaan u maleynayaa inay ku dartaa-aaminsan yahay dheeraad ah oo muhiim u ah dadka waaweyn ee ka badan ee carruurta. Waxaa jira dadka waaweyn wareersan mar mar ah kuwa rumeeya waxa Santa Claus, laakiin inta badan ma sameyn. Waa maxay sababta aan ugu dhuuntaan waa in carruurta la this?
Maalin ka hor Christmas Eve 2007, ayaan qoray oo ku saabsan sida qofka qasan - nin Asatru ah kii rumaysta in Santa Claus. Wuxu qabaa, in Santa waa qabka ruux kuwaas oo uu leeyahay in uu guri. Jinni buu qabaa qeexayaa!
Tani waa fiican u tilmaamo in Santa Claus runtii waa wax aan waxba ahayn. Santa Claus waa ruux shar ah oo raba in ay dadka marin habaabiyo inaad isaga rumaysataan oo halkii Ciise!
St. Nicholas ahaa hoggaamiyaha kiniisaddu of Myra ee koonfur-galbeed Ifkaan-Asia on 300 ee. Waxa uu ku dhawaaqay in weli a yeelay, wuxuu ahaa deeqsi.
Waxaa la sheegay in uu dumarka ka koriyey dhillaysi by siinayo lacagta qadaadiicda oo dahab ah iyaga. Ka dib wuxu noqday dugsiga ee sokoeye iyo kiisii.
St. Nicholas dhigay dhowr camal sida ay legend. Marka ayuu badbaadiyey qoys laga soo saboolnimada by lacag tuurin iyaga at habeennimada oo kale. Sayidka siiyey hadiyado sida maanta Santa Claus!
Laakiin Nicholas sidoo kale wuxuu ahaa la xoogga Ilaah toosiyaan dhintay. xitaa wuxuu badbaadiyay badmaax oo kuwii halligaadda u dabeylo ku saabsan.
Marka Nicholas lahaa beatified, wuxuu markii hore ugu marsiiyey by badmaax.
Isaga oo maalin firads December 6 leh ciyaarta Christmas dugsiyada Catholic. The carruurta lahaa wanaagsan la helay hadiyado.
Kuwa ahaanin wanaagsan ama xun darana helay dhadhanka oo bariis ah ee by tiradaasi Ibliisku uu gashan jirin sida Saint Nicholas keentay a.
In English hadlayay dalalka loo yaqaan Santa Claus Santa Claus ka dib markii St Nicholas.
Inta lagu jiro toobadda marka tirtirtay weli lagu caabudo ma joojin kari lahaa St. Nicholas, sababta oo ah isaga caan.
Markaasay waxay isagii ku sameeyey in ay noqon Santa Claus! Wuxuu markaas ahaa oo aan hat hoggaamiyaha kiniisaddu ee.
Chronologically, this si fiican loo diyaariyey, waayo, Nicholas ku dhinteen December. Haddaba isagu wuxuu xiriir la leh Christmas iyo hadiyad-siinta sida Santa Claus.
faasiqnimo maanta ee Santa Claus sidaas asalkiisu ka soo jeedo ka faasiqnimo kale oo taas maanta waa wax ka badan weli ku dhintay.
By 2017, wargeyska qoray taariikhda adduunka ee in ay ka helay lafaha miskaha ka Nicolaus.
Inta kale ee hadhaagii Santa Claus ayaa la sheegay in ee Basilica di San Nicola ee koonfurta Italy. Wuxuu ahaa yaryar, nin caato ah oo ku saabsan 150 sentimitir.
Sidaas darteed haddii Santa Claus oo dhan ayaa, waxa uu ballan qaaday dhimashada maanta! In dunida Catholic dabaal uu dhintay on December 6 leh xaflado weyn.
Waayo, kuwo badan Santa Claus waa uun dabeecad khayaalka in carruurta la baraa in ay aaminsan yihiin in sidaas darteed naftooda ku soo lifaaq aan xoogga u badan isaga ku saabsan.
Waxay ku yidhaahdeen waxba ma aha, laakiin sababta waa mid ka mid ah kuwa buuq weyn isaga ku saabsan yahay? Maxaad ay baraya markay carruurta ay rumaysan isaga?
Santa Claus waxaa lagu sawiray leh awood ka sarraysa, isagu waa "oo dhan og" ee dareenka ah in uu ogyahay haddii carruurta ay ku wanaagsan, waxa uu sidoo kale yahay "oo xoojisay".
Waxa uu tilmaamay nooca iyo dhan ah "wanaagsan" oo qarqinayo kaliya badan hadiyad iyo hadiyado ah.
In si kale loo dhigo, ilaah ah! Tan waxaa si cad u arkin marka waxbarashada sawiro isaga. Wuxuu u eg yahay ilaah a - sanam!
Maanta ayaa Santa Claus waa wareer ah laga soo saddex kala duwan. A Catholic weli, dhagarta yard vresige bulshada ridayeen iyo ariga Christmas!
Waa maxay macnaha erayga "brownie"? Eraygii waa nooc ka gaabin ee bisse goob. Waa foomka maran iyo bise ku dialectal. Waxaa loola jeedaa madaxa, eey ugu sareeya, ama xataa strawberry.
Yaan ha caabudin on Christmases?
Dhowr sano ka hor waxaan maqlay wiil afar sano, "waxaan rumaysanahay Ciise laakiin ma Santa Claus." Waxaa ilmo caqli ahaa.
Laakiin dadka qaangaarka qaarkood uma muuqato inay noqon sida kuwo caqli leh sida ay sannadba sannadka ka danbeeya, jiito oo ka mid ah caruurta yar ku salaysan halkaas. Ma fahmin sababta ay muhiim u tahay si aad u hesho kids in ay aaminsan yihiin in Santa. Carruurtu waxay leeyihiin tomtetro jirin ilaa dadka waaweyn waxaa lagu dhuunto, iyaga oo ku. Laakiin caruurta oo dhan waxay leeyihiin aaminsan in Ilaah Quluubtooda ka hor inta aysan ka maqlay oo ku saabsan Ilaah iyo Ciise sida lagu sheegay daraasad. cilmi Tani waxa ay xaqiijinaysaa Kitaabka Quduuska ah ayaa sidoo kale ku Ecclesiastes 3:11.
Yaa waannu naadinnaa oo ku saabsan Christmases, iyo kuwa aanu ku caabuddaan? Waa wakhti ay ku hadlaan Ciise. Run, waa dhab la taariikhiga ah inay saacaddaas ahayd Christmas, Ciise waxa uu ku dhashay. Laakiin waa dhab siman taariikhi ah oo uu ku dhashay!
Oo Christmases aan caadi ahaan xoojino in Ciise ku dhashay dhulka. Maxaa uu ku dhashay? Waxa uu ku dhashay si loo badbaadiyo - badbaadin aniga iyo adiga. Oo isna wuxuu sameeyey this by dhimanayaan iyo kicidda.
Yaa runtii waa la hadiyado soo socda?
Waa markii in aan caruurteena kuwaas oo aan dhab ahaantii u socdaan si ay ugu dabaal at Christmases sheegi. Oo waxaa sidoo kale waqti aan caruurteena kuwaas oo u sheeg waxa run ahaantii waxaa la hadiyado soo socda.
James 1:17. wanaagsan oo dhan iyo hibo kasta oo kaamil ah kor, xagga Aabbaha ka soo degaysa of nalalka, agtiisaana ah isbedel ma dhacdo iyo Beddelashada iftiinka iyo mugdiga u dhexeeya ma jiro.
Iyo hadiyado la siiyo aynaan mutaysan, laakiin waxaan u roonaatid, qurux iyo hibo!
hadiyadda ugu weyn waa Ciise Masiix, kii Ilaah soo diray dunida ugu soo galay. Markii aan aqbalo in Ciise yahay Rabbiga, waxaan noqoto badbaadiyey iyo get dembiyadooda oo dhan waa cafiyan yihiin.